Tsiazotafo : Sinoa nendahina jiolahy, voasambotra ny roa | NewsMada
Tsiazotafo : Sinoa nendahina jiolahy, voasambotra ny roa
Notafihina jiolahy maromaro tsy fantatra mazava ny isany ny Sinoa hamonjy fodiana teny Tsiazotafo ny alahady teo tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro. Nendahin’ireo ny kitapo teny amin’ireo sinoa ary nitsoaka ireo olon-dratsy. “Tao anatin’ny fotoana fohy no nitrangan’izany, nitondra fitaovana, mety ho basy ireo jiolahy. Nanenjika ihany anefa ny olona rehefa raikitra ny antsoantso”, hoy ny filazan’ny olona teny an-toerana.
Raikitra ny fifanenjehana ka tratran’ny olona ny roa lahy amin’ireo. Niharan’ny daroka avy hatrany ireto tratra, noho izany. Tonga teny an-toerana ny polisy ary naka azy roa lahy. Voa mafy ireo ary nentina teny amin’ny HJRA notsaboina.
Araka ny fanazavana, nisy vola azon’ireo jiolahy, saingy tsy hita io nandritra ny fitondran’ny polisy azy roa lahy. Tsy fantatra na lasan’ny namany izany na nisy nanararaotra ny fakana izany nandritra ny fisamborana azy. Mandeha ny fandihadiana ataon’ny polisy.